I-Radon yinto ye- radioactive element kunye nephawu lesakhi Rn kunye nenombolo ye-athomu 86. Nazi i-radon eziyi-10. Ukwazi kwabo kunokusindisa ubomi bakho.
I-radon igesi engenabalabala, engenasiphelo, kunye nongenangqumbo kwiqondo eliqhelekileyo kunye noxinzelelo. I-radoni i-radioactive kwaye iyancipha kwezinye izinto ezichanekileyo kunye ne-toxic. I-Radon ivela kwimvelo njengento yokubola ye-uranium, i-radium, i-thorium, kunye nezinye izinto ezinokutsha. Kukho i-isotopu eyaziwayo ye-radon. I-Rn-226 yinto eqhelekileyo kwezi zinto. Ingummemezeli we-alpha kunye nobomi bemizuzu engama-1601. Akukho nanye kwezi-isotopes ze-radon zizinzile.
I-Radon ikhona kwi-Earth crust in abundance of 4 x10 -13 milligrams kilogram. Ihlala ikhona ngaphandle kunye nokusela kwamanzi kwimithombo yendalo, kodwa kwizinga eliphantsi kwiindawo ezivulekileyo. Ngokuyininzi ingxaki kwiindawo ezifihliweyo, njengasekhaya okanye kwindawo yam.
I-EPA yase-US ilinganisela ukuba i-concentration ye-radon yangaphakathi i-1.3 i-picocuries ngeyure nganye (pCi / L). Kuqikelelwa malunga ne-1 kwikhaya eli-15 e-US ine-radon ephezulu, yi-4.0 pCi / L okanye ngaphezulu. Amanqanaba aphezulu e-radon atholakala kuwo onke amazwe ase-United States. I-Radon ivela kumhlaba, amanzi, kunye nokunikezelwa kwamanzi. Ezinye izinto zokwakha zikhupha i-radon, ezifana nekhonkrit, i-countertraps ye-granite kunye neebhodi zodonga. Inkolelo yokuba kuphela amakhaya asekudala okanye okuyilo lwakhiwo oluthile luyakwazi ukufikelela kumazinga aphezulu e-radon, njengoko ukuxinwa kuxhomekeka kwiimeko ezininzi. Ngenxa yokuba inzima, i-gas iyakuthi iqokelele kwiindawo eziphantsi. Iikiti zokuhlola iRadon ziyakwazi ukufumana amanqanaba aphezulu e-radon, ngokuqhelekileyo kuncitshiswe ngokulula kwaye ngokungazenzisiyo xa usongelwa.
I-Radon yimbangela yesibini yesikhokelo somdlavuza wamaphaphu jikelele (emva kokutshaya) kunye neyona nto ibangela umdlavuza wemiphunga kubantu abangabhemi. Ezinye izifundo zidibanisa i-radon evelele kwi-leukemia yobuntwaneni. Isalathisi siphumela ama-alfabhethi e-alpha, angenako ukungena kwi-sikhumba, kodwa angasabela kwiiseli xa isalathisi sinyakanyiswa. Ngenxa yokuba i-monatomic, i-radon iyakwazi ukungena kwizinto ezininzi kwaye ihlakazeka ngokusuka kwimvelaphi yayo.
Ezinye izifundo zibonisa ukuba abantwana basengozini ephezulu ukusuka kwi-radon ukuhlaselwa kwabantu abadala, mhlawumbi ngenxa yokuba bahlula ngokukhawuleza iiseli, ngoko ukutshabalalisa ngokwemizimba kubaluleke kakhulu. Kananjalo, abantwana banomlinganiselo ophezulu wokunciphisa umzimba.
I-element radon ihambe ngamanye amagama. Kwakungomnye wezinto zokuqala zomsakazo ezafunyanwa. UFredrich E. Dorn wachaza i-radon igesi ngo-1900. Wabiza ngokuthi "i-radium emanation" kuba igesi yavela kwisampuli ye radium. UWilliam Ramsay noRobert Grey kuqala ngo-1908. Ngomnyaka we-1923, igama latshintshela ku-radon, emva kwe-radium, enye yemithombo yayo kunye nento ebandakanyekayo ekufumaneni kwayo.
I-radoni igesi ephezulu , nto leyo ithetha ukuba inokhebe ekhethiweyo ye-electron shell. Ngenxa yesi sizathu, i-radon ayifuni ukwenza ama-chemical compounds. Iqumrhu libhekwa njengemichiza ekhutshweyo kunye ne- monatomic . Nangona kunjalo, kuye kwaziwa ukuba isabele ngefluorine ukwenza i-fluoride. I-Radon clathrates nayo yaziwa. I-Radon yenye yeegesi ezigqithiseleyo kwaye iyona nto ibaluleke kakhulu. I-Radon iphindwe kathathu kunzima kunomoya.
Nangona i-radesi ye-gaseous ayibonakali, xa iqela likhuphe ngaphantsi kweqondo layo lokuqhwala (-96 ° F okanye -71 ° C), likhupha i-luminescence ekhanyayo eguqulwa kwintshintshi ibe yubomvu obomvu njengokuba izinga lokushisa liyancipha.
Kukho ukusetyenziswa okusebenzayo kwe-radon. Ngesinye isikhathi, igesi yayisetyenziselwa unyango lwe-radiotherapy. Yayisetyenziselwa ukusetyenziswa kwi-spas, xa abantu bacinga ukuba kunokunika izibonelelo zonyango. Igesi ikhona kwiindawo ezithile zendalo, ezifana nemithombo eshushu ejikeleze i-Hot Springs, eAnsansas. Ngoku, i-radon isetyenziswe ngokutsha njengetayitile ye-radioactive ukujonga ukuphendula kwamakhemikhali kunye nokuqala ukuphendula.
Nangona i-radon ingabonwa njengemveliso yezoshishino, inokuveliswa ngokukhupha i-gases kwireyudi ye-radium. Umxube wegesi unokugqitywa ukudibanisa i-hydrogen kunye ne-oksijini, ukususa njengamanzi. I-carbon dioxide isuswa ngu-adsorption. Emva koko, i-radon inokuthi ingabikho kwi-nitrogen ngokukhupha i-radon.
Iimfihlelo zePomethini yeGomethri: Ukujonga kwiibhilididi
I-1966 i-Shelby GT350H i-Rent-A-Racer Mustang